Man United Oo Xiddig Hibo Leh Kula Tartamaysa Real Madrid - Axadle | Wararka Africa
America is formalizing the withdrawal of troops from Somalia
Elections in Ghana: an vital check for democratic consolidation
Masar & Soomaaliya oo kawada xaajoonaya Xiriirka, Iskaashiga
Waa maxay Sababta Sacuudiga uu Teleefoonada ugu diiday
Golaha Wasiirada XFS oo fadhi ka leh Caqabadaha hortaagan
Trump oo ku adkeystay in uu saarayo Ciidamada ka jooga
Man United Oo Xiddig Hibo Leh Kula Tartamaysa Real Madrid
By Apdihakem Omer Adam	 On Nov 20, 2020
Maalin wanaagsan akhristayaasheena sharafta leh meel kasta oo aad dunida ka joogtaan. Suuqii iibka ciyaartoyda ee xagaagii waxa uu xidhmay horraanta bishii October, waxaana dhowaan la sugayaa inuu furmo suuqa waqtiga jiilaalka ee bisha January oo muddo kooban ay kooxuhu u heli doonaan inay kaga soo faa’iidaystaan.
Xiddig Man City Ah Oo Gaadhigiisii Lamborghini-ga Ah Gabi Ah
Sevilla vs Real Madrid, Cadiz vs Barcelona – Shaqada Zidane
Kooxaha dhaawacyadu ragaadiyeen amaba doonaya inay helaan xiddigo ka caawiya xallinta dhibaatooyinkii ay soo arkeen qaybta hore ee xili ciyaareedka ayaa suuqa geli doona, sidoo kalena ciyaartooyo heshiisyada kooxahoodu dhamaad yihiin ayaa la kala jiidan doonaa oo lala soo wareegi doonaa, halka qaarkoodna heshiisyo hordhac ah lala sii gaadhi doono.
Sidii aad horeba nooga barateen, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa si joogto ah, wararkii ugu dambeeyey suuqa iibka ciyaartoyda ee ay qoreen wargeysyada waaweyn ee Yurub iyo xanta hoose ee aan wali bannaanka usoo bixin ee sida sirta ah ay jaraa’idku uga heleen kooxaha ee la xidhiidha suuqa.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ay saaka oo Jimce ah qoreen wargeysyada waaweyn, waxaana xuquuqda wararkan iska leh isla wargeysyada aanu kasoo xiganay oo aanu magacooda war walba ku hor qornay.
Manchester City ayay ka go’antahay inay lasoo saxeexato kabtanka Barcelona iyo Argentina ee Lionel Messi kaddib heshiiskii cusbaa ee uu Pep Guardiola u saxeexay. (Mirror)
Manchester United ayaa Paris Saint-Germain iyo Real Madrid kula tartami doonta saxeexa khadka dhexe ee da’yarta ah ee Rennes ee Eduardo Camavinga. (Marca – in Spanish)
Liverpool daafaceeda Virgil Van Dijk ayay kor u kaceen fursada uu xilli ciyaareedkan ugu soo laaban karo garoomada kaddib markii uu bilaabay tababarka fudud. (Mail)
Real Madrid iyo Inter Milan ayaa kor u qaaday rajadooda saxeexa Georginio Wijnaldum oo heshiiskiisa Liverpool dhacaydo dhammaadka xilli ciyaareedkan. (Mundo Deportivo – in Spanish)
Tiro kooxaha Premier League kamid ah ayaa xiisaynaya saxeexa kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos haddiiba uusan heshiis kordhin u samaynin kooxdaas. (90min)
Real Madrid ayaa u dhaqaaqi doonta saxeexa David Alaba oo Bayern Munich ka tirsan haddii uu Ramos heshiis cusub saxeexo iyo haddii kaleba. (Marca)
Everton ayaa tix-gelinaysa inay u dhaqaaqo garabka Manchester United iyo xulka Wales ee Daniel James bisha January (Football Insider)
Weeraryahanka Chelsea ee Olivier Giroud ayaa tix-gelin doona dalabaadka uu helayo bisha January si uu u xaqiiqsado booskiisa xulka qaranka France ee Euro ee sanadka dambe. (Guardian)
Juventus khadkeeda dhexe ee ree Germany ee Sami Khedira ayaa u furan inuu u dhaqaaqo dhinaca horyaalka Premier League isagoo bar-tilmaameed u noqon kara Man United iyo Everton. (Sun)
Bilyaneerka ree Nigeria ee Orji Kalu ayaa doonaya inuu saami ka iibsado kooxda Arsenal isagoo doonaya inuu guulaha koobabka waaweyn dib ugu soo celiyo. (Mirror)
Weeraryahanka ree Norway iyo kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland ayaa doonaya inuu koobab kula guuleysto Borussia Dortmund kamana fikirayo inuu koox kale u dhaqaaqo sida uu sheegay aabihii Alf-Inge Haaland. (Sport1, via Goal)
AC Milan ayaa xiisaynaysa saxeexa weeraryahanka kooxda Dynamo Kyiv ee Vladyslav Supriaha.(Calciomercato)
Juventus ayaanu ku jirin wax deg-deg ah oo ay ku bixin doonaan lacagta 31-ka Milyan ee Pound ah ee ay heshiiska Alvaro Morata oo amaah ugaga yimid Atletico Madrid joogto kaga dhigi karaan. (Goal)
Apdihakem Omer Adam 172 posts
Uganda oo sheegtay in ammaanka Xarunta DG Koofur Galbeed uu
EDITORIAL: Why Somalia ought to be taught from confusion in Ethiopia’s assertion
America is formalizing the withdrawal of troops from…
Elections in Ghana: an vital check for democratic…
30 Strategies To Lose Weight and Protect It Off
America is formalizing the withdrawal of…
Elections in Ghana: an vital check for…
30 Strategies To Lose Weight and Protect…